नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपालका कम्युनिस्ट वास्तविक कम्युनिस्ट होइनन् - प्रा. लोकराज बराल
नेपालका कम्युनिस्ट वास्तविक कम्युनिस्ट होइनन् - प्रा. लोकराज बराल
नेपालको राजनीतिमा धेरै कुरा तात्कालीक रूपमा नाटकीय ढङ्गले परिवर्तन हुने गरेको छ । २००७ सालको क्रान्तिमा पनि केही दिनको आन्दोलनले नै १०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासन ढाल्यो । २०१७ साल पुस १ गते पनि त्यस्तै नाटकीय पारामा बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था शुरु भयो । २०४६ सालमा केही दिनको आन्दोलनले फेरि ३० वर्षीय
पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरिदियो । राजतन्त्रको यति चाँडै अन्त्य होला भन्ने पनि थिएन तर भयो । त्यस्तै लामो समयसम्म जनयुद्ध गर्दै आएको माओवादी यति छिटै अर्को पार्टीमा गएर विलय होला भन्ने पनि सोचिएको थिएन । नेपालमा एउटै पार्टीको वर्चश्व नरहेका कारण पार्टीबीच नयाँ–नयाँ समीकरण भइरहने, सम्बन्ध परिवर्तन भइरहने, सरकारमा बस्ने र छोड्ने प्रक्रिया चल्दै आएको छ ।
 अहिलेको वाम गठबन्धन चुनावी स्वार्थका लागि मात्र हो कि दीर्घकालीन रूपमा नै हुने देख्नु हुन्छ ?
वामको इतिहास आफ्नै छ । २००६ सालमा गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टी त्यसपछि कैयौँ चिरा पर्दै आएको छ । दर्जनौँ पटक जुट्ने र फुट्ने हुँदै आएको छ । जुट्ने क्रमभन्दा फुट्ने प्रवृत्ति नै बढी छ । पार्टीभित्र व्यक्तित्वको टकराब र स्वार्थका कारण नै पार्टी फुट्ने क्रम चल्दै आएको छ । भोलिका दिनमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले यो पार्टी एउटै भएर नफुटी बस्न सक्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
Posted by www.Nepalmother.com at 4:42 PM